सफल सेक्सका लागि जाडो मौसम सर्वोत्तम – Health Post Nepal
सफल सेक्सका लागि जाडो मौसम सर्वोत्तम
२०७८ माघ २२ गते १८:३१
काठमाडौं – के तपाईंले जाडोमा सेक्स गर्नु भएको छ वा पहिलो पटक गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि जाडोमा सेक्स गर्नु भएको छ भने तपाईंलाई पक्कै थाहा होला यस्तो मौसमको सेक्स कत्तिको आनन्ददायक हुन्छ भन्ने। जाडोमा सेक्स निकै आनन्ददायक हुन्छ। यो न्यानोले भरिपूर्ण हुन्छ।
अहिले जाडो मौसम चलिरहेको छ। यस्तो मौसम यौन जोडीहरुका लागि सधैं विशेष हुन्छ। तर, गर्मीमा भन्दा जाडोमा सेक्स गर्नु किन राम्रो? यदि तपाईंको मनमा पनि यो प्रश्न छ भने आज हामी तपाईंलाई जाडोमा सेक्स किन खास हुन्छ भन्ने कुरा बताउनेछौं।
जाडोको सेक्सले न्यानोपन दिन्छ
सबैले जाडोमा न्यानो खोज्छन्। मानिसहरूले आफ्नो शरीरलाई न्यानो पार्छन्। तर जब तपाईं सेक्स गर्नुहुन्छ तपाईंको पार्टनर को शरीर को न्यानो पाउनुहुन्छ। जसले सेक्सलाई आनन्दमय बनाउँछ। जाडोको दिनमा धेरै जोडीले पटकपटक सेक्स गर्छन्। साथै, गर्मीमा भन्दा जाडोमा सेक्स गर्दा धेरै सहज पनि हुन्छ।
यौनसम्पर्क पछिको आलिंगन
गर्मीमा यौनसम्पर्क पछि कहिलेकाहीँ आलिंगन ऐच्छिक हुन सक्छ। किनभने यौन सम्पर्क गर्दा नै तपाईंलाई गर्मी भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यौन सम्पर्कपछि पार्टनरको शरीरमा टाँसिने मन लाग्दैन। तर जाडोमा यस्तो हुँदैन। जाडोमा यौनसम्पर्क गरेपछि आलिंगन गर्न सकिन्छ। जाडोमा यौनसम्पर्क मुख्यतया यौनसम्पर्कपछि आलिंगनका कारण राम्रो हुन्छ। गर्मीमा यौनसम्पर्कपछि आलिंगन सामान्यतया पाँच मिनेटसम्म रहन्छ। यस पछि जब तातो हुन थाल्छ तब पार्टनरहरु एकअर्काबाट अलग हुन्छन्। जाडोमा, तपाईं सेक्सपछि अँगालो हाल्ने सम्भावना बढी हुन्छ। किनकि यो न्यानो रहिरहन उत्तम तरिका पनि हो।
मोजा लगाएर सेक्स गर्दा चरमोत्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बढी
तपाईं मोजा लगाएरै यौन सम्पर्क जारी राख्न सक्नुहुन्छ यसले कुनै अप्ठ्यारो हुनेछैन। यसले तपाईंलाई कामोत्तेजनामा ​​पनि मद्दत गर्न सक्छ। विज्ञानले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। एक अध्ययनका अनुसार महिलाहरु मोजा लगाएर सेक्स गर्दा बढी आनन्द अनुभव गर्छन् र यसका कारण महिलाहरु चाँडै चरम उत्तेजित पनि हुने गरेको पाइएको छ। यदि तपाईं महिला हुनुहुन्छ भने यसले तपाईंलाई चरम यौन सन्तुष्टि दिने सम्भावना बढी हुन्छ।
पसिना नआउँदा सेक्स हुन्छ सहज
जाडोमा सेक्स गर्दा पसिनाले शरीर भिज्दैन। गर्मीमा सेक्स गर्दा मानिसलाई धेरै पसिना आउँछ। यस्तो अवस्थामा सेक्स गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। तर, जाडोमा अलिअलि पसिना आउँदा पनि यसले कुनै समस्या गर्दैन। गर्मीमा सेक्स गर्नुपरे एसी वा कुलर चलाउनु पर्छ नत्र पसिनाले निथ्रुक्कै भिजाउँछ। यस्तो अवस्थामा जाडो मौसममा सेक्स बढी सहज र रमाइलो हुन्छ। जोडीले एकअर्काबाट न्यानोपन पाउँछन्।
बिमारी हुनबाट बचाउँछ
एक अध्ययनमा बारम्बार यौनसम्पर्क गर्दा इम्युनोग्लोबुलिन-ए को उच्च स्तरसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ। यो एक त्यस्तो एन्टिबडी हो जसले प्रतिरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जाडोमा हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुने भएकाले जाडोमा यौनसम्पर्क गर्नु स्वस्थकर हो।